Ngo-2011: Yintoni onokuyilindela: Iiplatifomu ze-CAD-iGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/I-2011: Yintoni enokuyilindela: Ii-Platforms ze-CAD
Molweni zihlobo zam, amatheko, ii-cohetillos, ii-nacatamales kunye nokuwola koNyaka oMtsha kugqityiwe. Kuhle ukubuyela kweli cala lobomi, kunyaka olungileyo weendaba.
AutoCAD iphuma kwiminyaka 3 yokuba Yajika interface kwaye kukho Kuthiwa oku kungaba ngonyaka sisiganeko njengoko 2000, 20004, 2007 0 2010.
Kwelinye icala iBentley ifika kunyaka wayo wesibini wokubeka i (kunye no-3 Khetha) kwinguqulo yesi-8 ephantse yaneminyaka elishumi ubudala. Ngokusengqiqweni ke, sicinga ukuba bobabini banento ezandleni zabo engangunyaka engenakuqatshelwa kunye nengcinga zoluhlu oluthi ixesha lotshintsho olukhulu kule nto alunakuqhubeka nokuba yiminyaka emine ... kwaye emithathu sele kudala.
Kusenokwenzeka ukuba phakathi noMeyi siyabona ukuqaliswa AutoCAD 2012 -lucwangcise lo nyaka njenge-Ironman-sekwe kwiindlela ezimbini zokugqibela esizibonileyo ukusukela ngo-2008. Okwangoku akukho mbono ungako, kuba uluhlu lwezicelo luhamba ngokukhawuleza kunokusetyenziswa kwaye nangona kunokwenzeka khuphela i-AutoCAD 2012 mahhala, ngenjongo yokuvavanya, into encinci ikhankanywe ngayo.
Inketho yokuqala kukunyanzelisa ukufudukela kwilifa lesoftware esekwe kumgca wokuyalela kwaye sizinyanzele ukuba sisebenzise amaqhosha ngokuthanda. Oku kuhle kwicala elikhulu letafile yokuzoba, kuba ngenxa yoko kufuneka uzinyanzele ukuba usebenzise iilebhu ezisebenzisekayo, apho into oyifunayo kukwenza ukuba umsebenzi ubenomdla ngakumbi yonke imihla, ucinga ngokuhamba kwemisebenzi kunye nezinto kunokuba Ukuzoba umgca weeplani. Uninzi lweziganeko zamva nje ezenziwe yi-AutoDesk kwiinguqulelo ze-2010 kunye ne-2011 ziya kweli cala, nangona bengacingi ngemodeli yeBIM kwinqanaba lezinto ezilula. Qaphela ukuba ukuba ufuna ukuyenza, ungacebisa ukuba u-2013 uzakufuna enye (enye) inguqulelo ye-dwg, hayi kuba ihlala kuyo kodwa kuba kukuziqhelanisa nokuzonwabisa ukujika abo banokukhuphisana nabo.
Sithande izinto ezinje ngokusobala, iingxaki, kunye neendlela zokufihla izinto ngaphandle kokusebenzisa izixhobo zokubonisa; Nangona kunjalo, ukusebenza okwenziwa kolu khuphiswano, njengokujonga okuzimeleyo okuzimeleyo, ukufumana okuninzi ekusebenzeni nababeki-liso abaninzi, akunakuba kubi. I-AutoCAD 2011 sele ibonakalisile ukuba isantya sinokwenziwa ukuba sisebenze ngakumbi, ngethemba ukuba i-AutoCAD 2012 iya kuqhubeka nokwenza njalo, nangona oku kuyakufuneka sishiye ukuphuculwa kokunikezela ixesha elide (esele liphelelwe lixesha iintsuku).
Olunye uhlobo oluya kuthi siza kulusebenzisa ukusetyenziswa kakubi ngakumbi Abasebenzisi beMac. Akufanele kube nzima kuwe, kwaye andicingi ukuba ucinga ukuthatha i-ArchiCAD kwimarike kwakhona, esele ivele yazinza kancinci kulwakhiwo lwe-Architects. I-AutoDesk iyahamba ixesha elide, njengoko ibonakalisa oko uninzi lucebisile, ukuba inkampani emhlophe iyisithembiso seminyaka emi-5 ezayo ngaphambi kokuwa kwekota yePC ngolu hlobo. Ngokoluvo lwam i-AutoDesk iya kugxininisa ekusebenzeni kwi-ipad kwaye basebenzise inzuzo yokuba i-Maya, Revit, Inventor kunye nabanye kwiimeko ezizodwa ezifana ne-Civil3D kuthetha ukuba kulo nyaka siyakukholelwa kuza kufakwa kwi-manzanita version.
Ukuba wenzayo, ndifungela uthenge uMoya. -ja, kunyeNdingathanda-
Nangona kunjalo, isoftware enelo nqanaba lokuma, kubukho boluntu kwimarike yemasheya, iyasokola ngakumbi ukunciphisa ukhuphiswano kunokwenza izinto ezintsha (le yimvakalelo ebonakalayo yabatyali mali). Fumana uninzi lweenkomo zakho ngaphambi kokuba ufike kwinqanaba lokuhla. Kodwa andithandabuzi ukuba iqela elinoboya litshixelwe kwigumbi elingaphantsi licinga ngezinto ezingenakucingwa, kwaye bayasimangalisa ngento engaphaya kwemiyalelo efanayo etafileni ngaphezulu geek, kunye nomngcipheko owaziwayo wokuthathwa yiNtlanga kwiintlanganiso zoshishino.
Ngunyaka obalaseleyo weBentley, ongenakuphinda uqhubeke noKhetho lwawo lokukhetha ukuba ngaphezulu kwe-4 iya kuba yinto egqithileyo kubuchule bokuyila (ngegama). Kwenzeka ntoni ukuba ukutshaya kwale nkampani, okuthi ngokungabikho esidlangalaleni kodwa kwilifa losapho kubanike inkululeko engakumbi yokuzenzela ngokutsha phantse ngentando. Ke sinokulindela igama elidlula ukuthembeka kwe-V8, enyanzelisa ukuba uyisebenzise, ​​nokuba kukwenza okufanayo kodwa ngombono ongaphaya kwevector.
Ngokombono wam, ukuthambekela okuya kuqhutyelwa yiBentley kuya kuba I-model. Oku kuthetha ukwazisa i-Navigator kunye ne-dgn, ngokungathandabuzekiyo ngokuthembeka okukhulu, nangona umceli mngeni ungelula xa ucinga ukuba iBentley ifuna ukuyeka ukwaziwa yiMicrostation kwaye yazise iProjeke Wise kunye neAset Wise ngaphaya kwemakethi yayo yokuthimba. Isicwangciso esilungileyo siya kuba kukuqinisa ngakumbi unxibelelwano phakathi kwemigca yobunjineli, izityalo, uyilo kunye nothungelwano olujikeleze ukubekwa emgangathweni ngefomathi entle ebonakala ngathi iziswe kwenye iplanethi- nangona ingaziwa phantse kuyo yonke le planethi.
Into emangalisayo kukuba iya kuhlala ikhona enye ingqungquthela v8
Ndiza kulinda ukuba ndothuke, kuba ubunzima bokuba yi-emporium engazalwanga ndawo kunye nomngcipheko wokuba abazukulwana bathathe umdla omncinci kwilifa labo kunokukhokelela kumbono wokuya esidlangalaleni okanye ukukhangela umthengi omkhulu (ukuba kukuba ikho nenkuthazo efanayo). Into enenzuzo kukuphuhlisa usetyenziso kwi-xfm yezixhobo kwizixhobo apho iMicrostation ibekwe khona, kuba kukho isiqinisekiso sokuba iya kuhambelana nexesha elide. Nokuba siyayilibala i-VBA, njengoko i-AutoCAD 2011 iyishiyile, iBentley iyakuphela ishiya yonke into ezandleni ze- .net.
Kwezinye iimeko kukho ezinye ezinkulu, nango, zizo ezo zibonakala zikhona. Ngokungafaniyo ne-GIS kunye nokwenza imodeli, uMthombo oVulekileyo ubenendawo encinci yokwenza ukhuphiswano olunobunono ekufundeni nasekuhleleni uguqulelo lwamva nje lwe-dwg okanye dgn. Ndicinga ukuba aba babini banesivumelwano kunye nokungavuleki izithuba, ihlazo kwi-OS, nangona isishiyela ithuba lokuba ukusebenzisana kusondele yonke imihla. Ke andazi ukuba singalindela iindaba ezivela kwiQCad, i-BRL-CAD kunye nezinye ezingaziwayo kangangokuba ezinye azide zithi qatha ezingqondweni.
Lowo usondele kakhulu yi-IntelliCAD, ehlawulwayo iye yafuna ukufumana umhlaba kwindawo esele ikhona kwi-AutoCAD. Ngaphandle kokungalunganga oku kujongana nokungabizi kakhulu ukuba nefuthe, kuphela yiRibbon AutoDesk ukusukela ngo-2009 ibashiye kupavumente, isicwangciso esisekwe kwinjongo efanayo yedabi: ukuthandwa, ulawulo lwentando yesininzi kwaye andithandabuzi ukuba ulunya oluthile elula.
Kwaye ayikuko nokuba silindele ukuba amanzi afudumeleyo ayilwe kwisifundo esingumda (CAD, hayi usetyenziso). Kodwa ayibuhlungu into yokuba sibuyele umva talente ukwenza izinto ezifanayo njengoko ezintsha njengoko zafikelela imivalo asuswayo grafayithi powder irabha okanye irabha yombane, inventions abangenakuze olukhulu kodwa batshintsha ubomi ngenxa yokuba wasinika oko eyakhiwe.
Umlingo wokuba neengqimba ukuze kungabikho mkhondo wenqwelomoya nganye kudala wayeka ukusithimba, ngokuchanekileyo xa i-xml yanika ubomi kwimigca. Ngokungathandabuzekiyo silubonile utshintsho oluninzi kwi-CAD olusenze satshintsha ngakumbi ukuba isikhundla kunye igama lomdwebi kwiCadista.
Ngenxa yam inxenye ndiyathemba ukuba abahlobo bafuna ukuququzelela izinto esizenzayo ngaphambili, funa ukuba uSteve Jobs afune ukuba sithathe izicwangciso nge zi khonkwane. Ukunyanzelisa kwakhe ukungafuni ukwenza ipensile ye-iPad kuyandikhathaza.
Imibala yeholide kunye nemigca
I-Autocad 2012 kwividiyo ze-200 ukufunda ekhaya http://www.peruviantec.tk